”Is faham la’aanta dowlad walba la kowsatey ee ASWJ waa midda la degtey horumarka Galmudug!” | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Is faham la’aanta dowlad walba la kowsatey ee ASWJ waa midda la...
”Is faham la’aanta dowlad walba la kowsatey ee ASWJ waa midda la degtey horumarka Galmudug!”
(Hadalsame) 03 Nof 2019 – Isfaham la’aan Ahlu Sunna kala dhexeysay Federaalka oo aan hal Dowlad ku koobnayn ayaa wiiqday horumarka degaanka iyo Dowladnimada Galmudug.
Dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waan kula kulmay Hoggaamiyayaashooda iyo soddomeeyada ugu sarreysa ASWJ keli ahaantay iyo marar aan mas’uuliyiin kale oo maslaxad daneynayay aan wada soconnay.
Ilaa Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha iyo Wasiir Juxa annaga oo wada soconna iyo annaga oo laba laba ama saddex saddex ahba wadahadal waan la galnay, Madaxtooyada gudaheeda iyo dibaddeedaba, mararka qaar lagu gaaray saq Dhexe.
Halkaan ugama hadlayo ASWJ waxa ay qabteen ama ay mudan yihiin. Ugamana hadlayo dhaliilahooda.
Hadda isbeddel kasta oo degaankaas ka dhacaya laba ayaa aniga iigulu muhiimsan.
In aan dhiig ku daadan marka isbeddelku dhacayo iyo waliba ka dib isbeddelka dartiis.
Dhanaca kale, Ahlu Sunna cidina kuma wehlin ka saaridda degaanka iyo ka daafaca Shabaab. Iyagu garan waaye tab ay libintooda uga dhigaan mid dadka degaanku uu wada leeyahay iyaguna ay horseed ka yihiin.
Laakiin, Dowladda Federaalka oo hadda Galmudug toos ula wareegtay iyada ayay mas’uuliyaddu saaran tahay. Kama hadlayo doorasho iyo siyaasad. Waxaan ka hadlayaa amni iyo Daafaca degaanka. Yaan loo darsan Ahlu Sunna.
Waxaa Qoray: Yuusuf Garaad
Previous articleLukaku oo jebiyay rikoodh uu horay u dhigay Ronaldo
Next article”In wax laga qabto silaca Somalia waa waajib saaran Muslimiinta oo dhan!” – Cavuşoglu